Alshabaab oo Magaaladii Sagaalaad laga qabsaday. - Wargeyska Faafiye
Alshabaab oo Magaaladii Sagaalaad laga qabsaday.
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa Midowga Afrika ayaa Isniintii shalay ka qabsaday kooxda Al-Shabaab gacan ku haynta magaalada Maxaas oo 105 km dhinaca bari kaga beegan degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda ayaa sheegay.
Maxamed Saney oo ah taliyaha hoggaaminaya ciidanka dowladda ee qabsaday Maxaas ayaa u sheegay inay si nabad ku qabsadeen magaalada kaddib markii maleeshiyadii Al-Shabaab ee ku sugnayd magaalada ay carartay.
Taliyaha wuxuu sheegay inay haatan magaalada xasilloon tahay oo ay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM.
Saney ayaa intaas raaciyay inay sii wadi doonaan howlgalka milateri ee la doonayo in kooxda Al-Shabaab looga sifeeyo qeybaha kooban ee ay ka joogto gobolka Hiiraan.
Maxaas waa magaaladii sagaal ee laga qabsaday Al-Shabaab tan iyo markii horraantii bishan uu billowday howlgalka milateri ee ay sida wadajirka ah u wadaan ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM. Magaalooyinka muhiimka ah ee Al-Shabaab looga qabsaday howlgalka socda waxaa ka mid ah Buulo-burte, Xuddur iyo Qoryooley oo ku kala yaalla gobollada Hiiraan, Bakool iyo Shabeellaha Hoose.
Filed in: .Warka, Faafiye Latest news. Tags: magaalada Maxaas Alshabaab.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsSomalia charts new course in battle against piracy.Ismiidaamintii lagu weeraray M/weynaha cusubFAAFIYE TEAM BRINGS EXCLUSIVE SPORTS REPORTS AROUND THE GLOBECiidamo Jabuutiyaan ah oo gaaray B/weyne .12 qof oo ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay waddo isku xirta Nakuru iyo Eldoret.